Nagu Saabsan - Hangzhou Hongli Machines Co., Ltd.
Waxaa la asaasay Ogosto 2002, shirkaddu waxay leedahay in kabadan 70 shaqaale, 6 xarumo farsamo, waana shirkad ku saleysan teknolojiyad ku saleysan Gobolka Zhejiang. Shirkaddu waxay ku taalaa beerta warshadaha ee magaalada Linpu Town, Xiaoshan, Magaalada Hangzhou, Gobolka Zhejiang, hal kiiloomitir ujirta meesha ay ka baxdo Linpu ee Hangzhou Jinhua Quzhou Expressway oo ku xigta dhanka bari laba jibaaran wadada gobolka 03. Shirkadda mashiinka jarista dhijitaalka ah, aan ahayn -ka hortaga naqshadeynta iyo soosaarida qalabka, xariijinta isu imaatinka, qeybaha quseeya.
Falsafada ganacsiga: daacadnimada, wadajirka, khiyaanada, hal-abuurka iyo koritaanka waara
Waxaa la asaasay 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments CO., LTD waa xirfadle iyo hogaamiyaha soo saaraha aaladaha baaritaanka guud oo ay ka mid yihiin Heerkulbeegyada dhijitaalka ah, Heerkulbeerada Infrared, iyo Digital Sphygmomanometer iwm Awoodda billahayadu waa qiyaastii 850,000 unug oo heerkulbeegga iyo 100,000 oo unug oo loogu talagalay Sphygmomanometer.
Shirkad farsamo sare, waaxdayada 'R&D' waxay ka kooban tahay injineerro, farsamoyaqaanno iyo naqshadeeye khibrad badan u leh optoelectronics, semiconductor iyo IC design iwm.
Waxaan horey u dhisnay nidaam QC adag oo hufan. Dhammaan alaabadayada waxaa lagu soo saaray si adag nidaamka maaraynta tayada ee ISO 13485 iyo 21CFR820, si loo buuxiyo shuruudaha Caafimaadka CE iyo US FDA.
Adeeg heer sare ah iyo tayo la isku halleyn karo ayaa naga caawiya sidii aan ugu guuleysan lahayn sumcad caalami ah, tusaale ahaan:
Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Spain, Boqortooyada Ingiriiska, Poland… USA, Brazil, Argentina, Colombia, Mexico, Chile… Australia, Philippine, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore… Koonfur Afrika, Nigeria… Iyo dalal kale
Waxaa si heer sare ah loo bogaadinayaa haddii aad nala soo xiriiri karto wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkadeena iyo alaabada. Ku soo dhowow inaad nagala shaqeyso OEM iyo ODM.